ढोरपाटनको दुलेमा चितुवाको बिगबिगी, एकै रातमा पोल्ट्रीफर्मका ३० कुखुरा सखाप ! – ebaglung.com
ढोरपाटनको दुलेमा चितुवाको बिगबिगी, एकै रातमा पोल्ट्रीफर्मका ३० कुखुरा सखाप !
२०७४ फाल्गुन ३, बिहीबार ०७:२०	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
भैँसी दुहुन जाँदा चितुवाले पाडो खाँदै गरेको टिकारामले देखेपछी …
टिकाराम भट्राई, बुर्तिबाङ २०७४ फागुन ३ । ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर १ दुले आसपासमा चितुवाको विगविगी बढेको छ । वडा नम्बर १ दुलेको पारीपट्टी कुखुरापालन व्यवसाय गर्दै आएका दिल शेर्वुजाको शेर्वुजा पोल्ट्रीफर्मबाट चितुवाले मंगलबार राति एकै रातमा ३० ओटा लेयर्स जातका अण्डा पार्ने कुखुरा खाइदिएको छ । त्यस्तै खाराखेतमा कुखुरापालन गर्दै आएका दान वहादुर शेवुर्जाको गतहप्ता ५ ओटा कुखुरा खाइदिएको थियो ।
एक हप्ता अघि पनि खाराखेतकै खोलापारी भन्ने ठाउँमा टिकाराम पाण्डेले पालेको एउटा लैनो भैसीको पाडो पनि चितुवाले खाइदिएको थियो । पाण्डेले ६० हजार रुपैयामा भैसी किनेको भोलिपल्ट भैसी दुहुन जाँदा चितुवाले लैनो पाडो खादै गरेको देखेका थिए ।
खाराखेतमा केही दिन अघि मदन घर्ती मगरले पालेको कोइलर जातका ३ ओटा कुखुरा खाइदिएको थियो । यस्तै वडा नम्बर ४ हुन्द्रफेदीमा पनि स्थानियले पालेको कुखुरा रातको समयमा हराउने गरेका छन् । हुन्द्रफेदीमा हराएका कुखुरा स्याल चितुवाले खायो अथवा कसैले चोरेको हो भन्नेबारे खुलेको छैन । यसरी चितुवाले धमाधम कुखुरा खाने तथा अन्य वस्तुभाउ खान थालेपछी किसान चिन्तीत बनेका छन् ।
प्रथम शहीद लखन थापाको सम्मान भएन